Kulankii ugu horreeyay ee Beesha Qaseysa ee UCI | Laga soo bilaabo Linux
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee kor loogu qaado Meel furan Waa iyada oo loo marayo shirarka isticmaaleyaasha, maadaama ay iyadu amaahdo isweydaarsiga iyo ka doodista mowduucyada kala duwan. Xaaladdan oo kale, waxaan kuu keenayaa qoraal ku saabsan kulan ay qabteen xiisaha 3D ee Jaamacadda Sayniska Kombiyuutarka ee Cuba (ICU).
Wixii muddo dheer la fikirayay suuro gal ma ahan, waa fuliyay galabnimadii shalay Febraayo 26 a kulan oo ka mid ah Beesha Qase gudaha Jaamacadda sayniska macluumaadka.
Wuxuu ka faa'iideystay waqtigaas inuu bixiyo guriga leedahay a koorsada tababarka ku saabsan Qase; masuulka ka ah Yunior Frómeta Carbonell dhawaan ka qalin jabiyay jaamacadayada, oo shaqooyin kala duwan ka soo qabatay qalabkan iyo rogeen aqoon ballaadhan.
Kadib samaynta a soo koobid aad u dhakhso badan qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah codsiga ay taabteen dhinacyada sida:
Dhawr ka mid ah gaaban lagu sameeyay tan xoogga badan qalab sida:
Mid kasta oo ka mid ah mawduucyadan qaawan waaya-aragnimadooda shaqsiyeed ee shaqada qalabkan, iyo sidoo kale khiyaamada waaweyn iyo tas-hiilaadka.
Qaar ka mid ah ardayda jaamacadda su’aalo ayey weydiiyeen si loo caddeeyo shakigaaga ku saabsan animation iyo dirqi. Qalinjabiyaha ugu dambeeyay ee Kulliyadda 5 qaawan taxane ah oo shuqullo ah fuliyay isaga, iyada oo ujeedadu tahay dhiiri geli ardayda shaqada la socota Isukeen.
Wuxuu sharraxay muhiimadda ay leedahay aqoon guud ee aaladda laakiin taasi a takhasuska iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro qoto dheer sii qoto dheer mawduuc gaar ah, had iyo jeerna la xoojiyo in mid walbaa uu ku takhasuso waxa la rumaysan yahay ee ugu fiican ama isku dayo waxa ay ugu jecel yihiin adduunka 3D.
Kulanku wuxuu ku dhammaaday iyada oo la siinayo borofisar ka ah Kulliyadda 5 Luis Gabriel Viciedo Carballoso xoogaa DVD ah oo leh fiidiyowyo casharro ah oo ujeedkiisu yahay is dhexgal dhexdooda kuwa jecel Blender si mid waliba u kordhiyo awooddiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Kulankii ugu horreeyay ee Beesha Blender ee UCI
Waan jeclahay dadaalka noocan ah ... nasiib daro wadankeyga kaliya FliSOL ayaa la siiyaa sidaa darteed waxaan rajeynayaa in mar uun ay sameyn karaan (ama sameyn doonaan) wax la mid ah ...
@elav: Goob banaan top ka waran barta GUTL ee hoos u dhacday ???
Jawaab R @ iden
Sidee la yaab leh .. Waan heli karaa ..
Dhibaato ayey ku noqon doontaa shabakadeyda markaa, maxaa yeelay waxay halkan ka samaynayaan datacenter cusub waxaana jira adeegyo bixinaya waxyaabo ... Salaan ...
Hagaag, ma heli karo
Waa inuu ahaadaa wax Firewall ah TinoRed ¬_¬
Elav, waxyaabaha (buugaagta iyo DVD-yada) ee lagu qaybiyay kulankan, ma laga heli karaa internetka?
Ma aniga uunbaa mise qof walbaa hore ayuu u janjeeraa oo inta badan si uun buu madaxiisa gacanta ugu saaraa?
Kuwa xiiseynaya, waa kuwan 5 gaagaaban ee lagu xusay boostada:
Qase waa aalad aad u awood badan.
la kulan wanaagsan, waxaan rajeyneynaa in bulshada ay guuleysan doonto! ku farxi oo horay u sii wad shirarkaas, waxaan ahay naqshadeeye garaaf ah waxaanan sidoo kale ku sameeyaa moodeelka 'Blender', barnaamij heer sare ah!
Taasi waa hadafkeena ugu weyn si aan u gaarno bulsho weyn jaamacadda dhexdeeda iyo dalka oo dhan. Haddii aad xiiseyneyso inaad nagala shaqeyso si kasta, ila soo xiriir, waan aqbalnaa wixii fikrad ama talo ah. Farxad
Jawaab Lester Collado
Waad mahadsan tahay, maskaxda ayaan ku hayn doonaa.
Kuwa xiiseynaya inay bilaabaan barnaamijyada qoraallada loogu talagalay 'Blender', oo leh luqadda Python: http://goo.gl/BEsSm Goobtani waa meel loogu talagalay iskaashiga dalabka Python, iyada oo loo marayo qoraallo loogu talagalay barnaamijka Qase. Su'aalaha iyo shakiga aad qabtid marwalba waa lasoo dhaweynayaa. Layligu ma aha fiidiyowyo, waa qoraallo iyo sawirro, la-talinno waxaa lagu sameyn karaa emayl, heerku waa u furan yahay qof kasta, xitaa haddii uusan aqoon u lahayn barnaamijka. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo booqato barta aan macaash doonka ahayn oo aan qiranayn xayeysiinta.
Jawaab Mario Antonio Herrero Machado
Waxa uu soo jeedinayo ayaa ah haddii saxiixyada ay sameeyeen hay'ad kale oo aan ka ahayn Microsoft, haddii ay aqbali laheyd in la saxiixo kernel, si toos ah loo badbaadiyo shaqada dadka kale?
Adiga oo kula jira .... SolydXK